Xiaomi Watch Color dia aseho amin'ny fomba ofisialy | Androidsis
Nanamafy i Xiaomi ny fanombohana ny fiambenana marani-tsaina vaovao Watch Color. Ity vokatra vaovao avy amin'ny orinasa ity dia azo antoka fa iray amin'ireo smartwatches tokony ho raisina noho ny fahaleovan-tena nahatongavany sy ny masontsivana ampidirin'ny mpanamboatra izay mitandrina tsara ny endrika.
Xiaomi Watch Color dia natomboka ho an'ny tanora ary tsy dia be loatra rehefa mifehy ny andavanandrontsika amin'ny alalany, mety ho an'ny atleta noho ny fiasa sy ny fanaingoana nampiana. Ny vidiny dia hahatonga anao hiady amin'ny fifaninanana ary misy loko maromaro hisafidianana, safidy iray hafa mankany amin'i Xiaomi Mi Watch.
3 Fifandraisana sy sensor
4 Loko azo
5 Jereo ny vidin'ny loko
Mampiditra ny maodely efijery AMOLED 1,39-inch amin'ny savaivony miaraka amina vahaolana 454 x 454 teboka, karazana boribory ary misy sehatry ny tonony mainty, ao no hahafahantsika mahalala voalohany ny fampahalalana rehetra. Ny fifehezana ny dingana, ny kilometatra ary ny famonoana dia olana amin'ny fijerena ny tontonana.
Ny bateria nitaingenan'ny Xiaomi dia 420 mAh, fampiasan'ny mahazatra 14 andro, 22 ora amin'ny fomba fitsitsiana herinaratra ary hatramin'ny 22 ora mampiasa ny Watch Color miaraka amin'ny hetsika fanatanjahan-tena. Miaraka amin'ny fiampangana feno dia afaka mankafy azy isika fa tsy mila mandoa azy raha mampiasa azy io ho toy ny famantaranandro mahazatra.
Fifandraisana sy sensor
Raha mamirapiratra zavatra ity fitaovana ity, dia noho ny fifandraisana, toy ny fenitra dia miaraka amin'ny Bluetooth 5.0 BLE, raha ny sensor kosa dia GPS, monitoran'ny tahan'ny fo, accelerometer, gyroscope, sensor magnetika, barometre ary sensor light ambient. Ahafahanao mandrefy ny adin-tsaina, ny fanaraha-maso ny torimaso, ny fanaraha-maso angovo, ny mpanazatra miaina ary ny fanaraha-maso pulsa tontolo andro.
Amin'ny farany dia tsy hisy ireo loko 1.500 110, ny fanaingoana ny tontolon'ny fiambenana 7 misy tadiny XNUMX samy hafa dia hamela anao hitafy hafa isan'andro. Araky ny anarany, Watch Color dia famantaranandro namboarina tanteraka natolotry ny mpampiasa.
Jereo ny vidin'ny loko
Ny vidin'ny Xiaomi Watch Color dia manodidina ny 102 euro hanova - 799 yuan -. Izy io dia azo vidiana amin'ny loko mainty na volafotsy amin'ny alàlan'ny tranonkalan'ny orinasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Xiaomi Watch Color dia aseho amin'ny fomba ofisialy
OverDrive dia mitondra anao any amin'ny valopolo taona mba hitondra fiara amin'ny hafainganam-pandeha tanteraka